PSJTV | यसो भन्छन् हत्या आरोपी आलमका भाइ
१७ जना सर्वसाधारणको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका कांग्रेस नेता तथा सांसद अफ्ताव आलमका भाइ मोहम्मद सकिल अख्तरले दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारले दाजुलाई फराउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
आलमका काकाको छोरा मोहमद सकिन कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित रौतहटको राजपुर नगरपालिकाका मेयरसमेत हुन्।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित मोहमद सकिनको अन्तर्वार्ताको सार संक्षेपः
एकै ठाउँमा हो । उहाँको टहरो घर र मेरो घरको साँध जोडिएको छ।
केही पनि भएको छैन । भोलिपल्ट चुनाव थियो । गाउँमा चुनावको महोल थियो । सुरक्षाकर्मी गाउँमा थिए । अरू के हुन्थ्यो ।
त्यस दिन इद्रिसको टहरोमा बम विस्फोट हुँदा कहाँ हुनुहुन्थ्यो?
कहाँ विस्फोट भयो बम ? मलाई त थाहा छैन । घरमै बसेको मान्छे म । मलाई त थाहा हुनुपर्ने हो । त्यसमाथि चुनावमा गाउँभर सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए । उनीहरूलाई त थाहा हुनुपर्ने हो । त्यस दिन सुरक्षा–प्रबन्ध निकै कडा थियो । त्यस्तो वेला कसरी बम विस्फोट हुन सक्छ?
बमको धमाका ११ किलोमिटर टाढाको गौरमा बसेका मान्छेले समेत सुनेको अहिले पनि बताउँछन् । धुवाँको मुस्लो पनि माथि आकासमा उडेको थियो रे?
पटका पड्केको हुन सक्छ । मान्छेले त्यसैलाई बम भनिदिए । खासमा भएको केही होइन।
धुवाँको मुस्लो कसरी उड्यो त?
घटनास्थलमा ओसी अख्तरको कपडा, जुत्ता भेटियो भन्ने छ नि?
ओसी अख्तरलाई चुनावी प्रचार त तपाईंकै दाइले ल्याएको होइन?
पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंहलाई चिन्नुहुन्छ?
को हो त्यो मान्छे?
जिल्ला अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र पुनरावेदनले खारेज गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले किन उल्टायो त ?
यसमा यस्तो छ– उहाँहरूले जाहेरी दिनुभयो, मुद्दा अदालतमा पुग्यो, तर प्रमाण नपुगेर खारेज भयो । प्रमाण पुगेको भए त मुद्दा चलिहाल्थ्यो नि । जिल्ला अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र पुनरावेदनले खारेज ग¥यो, ठीक ग¥यो । अब सर्वोच्चले किन उल्टायो, के भन्न सकिन्छ र ? मलाई शंका छ, सर्वोच्च प्रभावित भयो ।
त्यसो भए सर्वोच्चको आदेश गलत हो?
मुलुकमा दुईतिहाइको सरकार छ । अफ्तावको लोकप्रियता सक्न योभन्दा उत्तम मौका उनीहरूले देखेनन् होला । त्यही भएर बम विस्फोटमा संलग्न भएको आरोप लगाए । पक्राउ परेको त्यही कारण हुन सक्छ।